Dhagaysiga Dacwada rag loo haysto dilkii weriye Khashoqji oo Turkiga ka bilaabatay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dhagaysiga Dacwada rag loo haysto dilkii weriye Khashoqji oo Turkiga ka bilaabatay
Wararka ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in ay ka bilaabatay maxkamadeynta 20 qof oo Sucuudiga u dhashay kuwaas oo loo heysto dilkii weriye Jamaal khaashuqji oo sannadkii 2018-kii lagu dilay qunsuliyadda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Raggan la maxkamadeynayo ayaan ku sugneyn dalka Turkiga waxaana dhagaysiga dacwada ay dhacaysaa iyagoo maqan.
Eedeysanayaasha ayaa waxaa ka mid ah labo ruux oo hore ugu shaqeyn jirtay dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Khaashuuji oo si weyn u dhaleeceyn jiray dowladda Sacuudiga ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Istaanbuul uu Sacuudiga ku leeyahay.
Khaashuuji ayaa maqaallo ku qori jiray wargeyska Washington Post isaga oo geeridiisa ka hor ku noolaa dalka Mareykanka.
Hase yeeshee qaar ka mid ah raggan loo haysto dilka Khashoggi ayaa maxkamad ku taal boqortooyadda sacudi carabiya ku xukunta dil balse dhowaan ayaa carruurta uu dhalay Jamal Khashoggi waxa ay sheegeen inay cafiyeen raggii diley aabahood.
Previous articleItoobiya oo qaaday talaabooyin ay uga hortageyso faafinta Banaan baxyada socda
Next article(XOG) RW Khayre & MW Farmaajo oo kadhaxeeyo khilaaf aad u adag